‘Secret Garden’ ပရိုဂျုဆာမှ ရိုက်ကူးမယ့် ဇာတ်ကားအသစ်တွင် Hyun Bin နဲ့ Park Shin Hye အတူသရုပ်ဆောင်သွားမှာလား? – Trend.com.mm
‘Secret Garden’ ပရိုဂျုဆာမှ ရိုက်ကူးမယ့် ဇာတ်ကားအသစ်တွင် Hyun Bin နဲ့ Park Shin Hye အတူသရုပ်ဆောင်သွားမှာလား?
Posted on January 26, 2018 by Wint
SBS drama ‘Yeowoo Gaksibyeol’ အတွက် ကမ်းလှမ်းမှုကို Park Shin Hye ဘက်မှ ပြန်လည်ဆန်းစစ်နေကြောင်း S.A.L.T Entertainment တွင်မကြာသေးခင်ကမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် အဓိကမင်းသားက Hyun Bin ဖြစ်တယ်လို့ ဇန်နဝါရီ ၂၄ရက်နေ့က သိရပါတယ်။
VAST Entertainment အေဂျင်စီမှ ” SBS ‘Yeowoo Gaksibyeol’ က Hyun Bin ကို ကမ်းလှမ်းထားတာမှန်ပါတယ်..အခုထက်ထိတော့ ဘာမှအတည်မပြုရသေးဘူး” လို့ ဆိုပါတယ်။
‘Yeowoo Gaksibyeol’ ရဲ့ ပရိုဂျုဆာ Shin Woo Chul က ဒီဇာတ်ကားကို ခံစားမှုပြင်းပြင်းလေးရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လိုက်နှစ်ယောက်ဟာအတိတ်က အရိပ်ဆိုးတွေကြောင့် နာကျင်နေတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားပေးမယ့်သူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံသွားကြတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနွေမှာ ထုတ်လုပ်မှုကိုအစီစဉ်ဆွဲသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေရော Hyun Bin နဲ့ Park Shin Hye ကို အတူရိုက်ကူးစေချင်လား ?
‘Seoul Music Awards’ မှာ BTS ဖျော်ဖြေမှုကို အားပေးခဲ့တဲ့ Black Pink အဖွဲ့
သူများကြိုးကိုင် ခြယ်လှယ်နေတာကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖယ်ရှားမယ်..